जाडोमा हिटर ताप्दै हुनुहुन्छ ? सावधान !! यी कुराहरुमा ध्यान दिनुहोस नत्र ज्यान समेत जान सक्छ.. – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Health/जाडोमा हिटर ताप्दै हुनुहुन्छ ? सावधान !! यी कुराहरुमा ध्यान दिनुहोस नत्र ज्यान समेत जान सक्छ..
काठमाडौं। जाडो मौसममा मानिसहरुले न्यानो बनाउन अनेक उपायहरु अपनाउने गर्दछन। कसैले आगो तापेर,कोइला बालेर, कसैले हिटर बालेर न्यानो बनाउने गर्दछन । बिशेष गरेर बालबच्चा केटाकेटी भएको घर परिवारमा न्यानो बनाउन धेरै जरुरि हुन्छ । चिसोका कारण विभिन्न खालको स्वास्थ्य समस्या आउन नदिन पनि चिसोबाट टाढै रहनु पर्दछ । अत्याधिक चिसोलाई रोक्न न्यानो कपडाले मात्र नभएर आगो ताप्ने हिटर बाल्ने गरिन्छ ।
तर,अन्य कुरामा भन्दा आगो ताप्न र हिटर बाल्दा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ । नत्र ठुलो दु र्घटना निम्तिन सक्छ ।
हामीले घर बाहिर मात्र नभएर कोठा भित्र पनि कोइला बाल्ने,हिटर ताप्ने गरिन्छ । त्यो गर्नु भन्दा पहिले आफ्नो कोठा भित्रका झ्याल ढोका बन्द छन् भने खोल्नु पर्ने हुन्छ । हावा नछिर्ने बन्द कोठामा कोइला,हिटर ताप्दा कोठामा कार्बनडाइअक्साइड वा कार्बन मोनोअक्साइड ग्याँस बढ्न जाने र उक्त ग्याँस धेरै समयसम्म शरीरमा प्रवेश प्रत्यक्ष असर गर्नुका साथै ज्यानै पनि जान सक्छ। धेरै लामो समयसम्म हिटर ताप्ने र नजिक बसेर पनि हिटर ताप्नु हुदैन । किन भने यसबाट निस्कने कार्बन मोनोअक्साइड ग्याँस हाम्रो स्वास्थ्यको निकै हानिकारक हुन्छ, जसले गर्दा स्वास्थ्यलाई असर गर्दछ।
नजिकै बसेर पनि हिटर ताप्नु हुँदैन । यसले छाला सुख्खा हुने, आँखामा समस्या आउने र नाकको रक्तनली फुट्नेजस्ता समस्या देखा पर्छन् । धेरै समयसम्म हिटर ताप्दा शरीरलाई गर्मी पैदा गर्नुका साथै छाला सुक्खा गराइदिन्छ। सकेसम्म हिटर ताप्दा साथमा तरल पदार्थ पानी, चिया पिउँदै हिटर ताप्नु राम्रो मानिन्छ जसले गर्दा छाला सुख्खा हुनबाट जोगाउछ ।
इन्टरनेट कुलतले ३० वर्ष नपुग्दै दीर्घरोग